पहेंलो निर्धारण बिना गंध। म अत्तालिएँ गर्नुपर्छ?
यो हरेक महिला र केटी गर्न परिचित भएको जनन देखि छुट्टी कुनै गोप्य छ। र पनि धेरै युवा बालिका बीच, तिनीहरूले पनि, बारम्बार आमाबाबुको चासो पैदा छन्। यो चयन सधैं सानो गांठ को समावेशन बिना मात्र स्पष्ट र गंध पूर्ण कमी छ भन्न छैन। कहिलेकाहीं तिनीहरूले सेतो, र कहिले काँही एक yellowish वा खैरो छन्। लगभग सबै महिलाहरु पाठ्यक्रम, आफ्नो शरीर मा भइरहेको छ के अझ बढी ध्यान गर्छन र, पहेंलो छुट्टी योनी बाट अनदेखी गर्न सकिँदैन। कि नगर्ने अलार्म जुटाउने वा सामान्य हो? यी मुद्दाहरू अक्सर छलफल गर्दै छन् र महिला राय अक्सर diametrically विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले, objectively मुद्दा स्पष्ट गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
पहिले, पहेलो छुट्टी, बिना गंध, कुनै पनि मामला मा आवश्यक अक्सर तब सम्म unnoticed जाने जो विभिन्न भडकाऊ प्रक्रिया को उपस्थिति, को संभावना बाहिर शासन गर्न एक धब्बा लिन चाहे निर्णय गर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सूचना हो पनि भने।
तर, सबै को पहिलो, तपाईंले गंध उपस्थिति सचेत हुनुपर्छ। यो सामान्यतया माछा, प्याज, आदि को गन्ध जस्तै महिला विशेषता छ निस्सन्देह, यो सौम्य, राख्न एक सानो राम्रो छ, तर यसरी शरीर कारबाही गर्न आवश्यकता संकेत दिन्छ।
तर, पहेंलो छुट्टी महिला पनि जागा-अप कल रूपमा सेवा गर्न सक्छ, तुरुन्तै याद छ कि, बिना गंध छ। जहाँ यसलाई सामान्य मानिन्छ मामला सूची सुरु गर्न:
- ovulation को समय, मा जब तथाकथित एक उत्पादन "पहेंलो शरीर।"
- सुरुमा महिनाको (वा तिनीहरूको पूरा पछि)। यस मामला मा, गंध बिना पहेंलो छुट्टी बस रगत थक्के को एक सानो समावेशन छ।
- गर्भावस्था को समयमा र स्तन-रुचाउने समयमा पनि हाइलाइट रंग परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कारणले गर्दा यो अवधिमा हर्मोन महिलाहरु को पुनर्गठन छ।
- साथै, विरामीहरु मा मौखिक निरोधकों पनि जसमा हर्मोन को एक सानो खुराक उत्पन्न गर्न सक्छन् हाइलाइट रंग परिवर्तन प्राप्त।
तथाकथित सह-कारक - यो मुख्य कारण तथापि, तपाईं नजिक ध्यान अन्य तिर्न पर्छ छ। तपाईँले खुजली, बेचैनी, जल, रंग चयनहरू परिवर्तन सँगसँगै महसुस रूपमा, तपाईं तुरुन्त जस्तै ovaries, appendages को सुनिंनु र पनि ग्रीवा क्षरण रूपमा, सुनिंनु निकाल्न आफ्नो स्त्रीरोग विशेषज्ञ सम्पर्क गर्नुपर्छ।
त्यहाँ गंध बिना पहेलो छुट्टी आदर्श हो जहाँ अर्को मामला छ। केही घण्टा भित्र (एक महिलाको योनी मा फटना को मामला मा) असुरक्षित सहवास पछि निर्धारण पनि रंग परिवर्तन गर्नुहोस्। यो कि परिवर्तन पुरुष शुक्राणु र योनी microflora एउटा प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो। तर यस्तो अवस्थामा तिनीहरूले यौन सहवास पछि 10-12 घण्टा अधिकतम प्रदर्शनी।
त्यसैले, अग्रिम नआत्तिनुहोस्, तर कुनै पनि मामला मा आफ्नो चिन्ता बारेमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ सूचित गर्न राम्रो छ। सम्भावित परीक्षण सही आफ्नो हालत निदान गर्न साथै, डाक्टर तपाईं उपयुक्त चयन गर्न हुनेछ मौखिक निरोधकों र जाँच हर्मोन।
एक जन्म चोट के हो?
Lactation सही कसरी सुधार गर्न?
मास्को मा Gynecological क्लिनिक, सार्वजनिक र निजी: समीक्षा, मूल्यांकन। मास्को मा सर्वश्रेष्ठ gynecological क्लिनिक
महिला सेता cheesy छुट्टी - thrush को चिन्ह
विवरण र मदत: महिनावारी अघि पीएमएस को मुख्य लक्षण
0 100 वर्ष देखि वर्ष विवाह को नाम
कसरी पूर्ण रूपमा वा अस्थायी रूपमा फेसबुकमा पृष्ठ मेटाउन?
सलाद "मलाबाई": एक फोटो संग एक नुस्खा। तीन प्रकारका सलाद "मलाबाई"